Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia ... 8 abathengisi abathembekileyo kwezi nyanga | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Ezinye zisandula ukuphuma kwaye ezinye bezisemarikeni okwethutyana, kodwa sele ziluhlu oluphezulu lwabathengisi. Amagama okugqibela njengo-ALlende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia, Hess, Monfort okanye Del Val ngababhali umthengisi ogqibelele eme ngaphandle kwesi siqingatha sokuqala sonyaka. Makhe siyiqwalasele izihloko yezi ngoma zintsha ezivela kubabhali abazisebenzisileyo.
1 Ixesha elide lolwandle-Isabel Allende
2 Eyona nto intle malunga nokubuya iyabuya - u-Albert Espinosa
3 UCandela-uJuan Del Val
4 USakura - Matilde Asensi
5 Ubusuku obuwaka ngaphandle kwakho - uFederico Moccia
6 Abasetyhini abathenga iintyatyambo - uVanessa Monfort
7 Indlu yaseJamani - uAnna Hess
8 Isikhephe sokugqibela-iDomingo Villar
Ixesha elide lolwandle -UIsabel Allende
I-Allende ingaphezulu isetyenziselwa ezona meko zithengisa kakhulu. Eli libali lakhe lakutshanje.
Siya kwimfazwe yamakhaya kunye nogqirha oselula uVíctor Dalmau, kunye nomhlobo wakhe wepiyano uRaser Bruguera, kufuneka bayishiye i-Barcelona ekuthinjweni eFrance. Bahamba ngenqanawa kwi eyayiseWinnipeg, inqanawa eyayiqeshwe yimbongi uPablo Neruda eyathatha ngaphezu kwamawaka amabini amaSpanish aya eChile. Apho bamkelwa njengamaqhawe kwaye baya kudityaniswa kuluntu lweli lizwe kude kube kubhukuqwe okubhukuqa uGqirha Salvador Allende, umhlobo kaVictor ngenxa yothando lwabo oluqhelekileyo lwechess.
Eyona nto intle ngokuya kubuya - UAlbert Espinosa
Omnye ochitha usuku njengoyena mthengisi ubalaseleyo nguAlbert Espinosa. Kwaye le yeyakho isindululo esitsha kumgca wakhe oqhelekileyo we ithoni enethemba kunye namanqaku efilosofi. Ibali malunga neenkumbulo, ukuxolelwa nothando ngosuku olunye, ngo-Epreli 23, phakathi kwesixeko saseBarcelona kunye neziqithi zeIschia neMenorca.
Candela -UJuan Del Val
UDel Val ubenjalo Ibhaso leNoveli yasentwasahlobo yowama-2019 Ngale ncwadi sidibana kuyo noCandela. Ungumfazi okwiminyaka engamashumi amane ubudala enobomi obuqhelekileyo, oqhele ukuhlala yedwa, obukele kakhulu kwaye enoburharha. Ngamafutshane, i umzobo womfazi owahlukileyo.
Sakura -UMatilde Asensi
Uthengisa okuqhubekayo, u-Asensi uthatha ithuba kule noveli apho Amasiko enkcubeko yaseJapan anemizobo yokuprinta, ukiyo-e kunye nobugcisa basesitratweni. Njengomzekeliso kuyo yonke le nto kwaye nakubalinganiswa kunye nebali, kukho loo nto ukuqhama kweetsheri, isihloko sakura, ekwaluphawu lobuhle kunye nokudlula kobomi. Konke ukutyhila i-enigmas ye ukunyamalala komzobo kaVan Gogh ethengwe ngusozigidi waseJapan.
Iwaka lobusuku ngaphandle kwakho -Federico Moccia
Akunakwenzeka ukuba ufunde igama lesiTaliyane kwaye ungacingi ngeencwadi eziqhubeka zithengiswa kakhulu. Le yi Inxalenye yesibini ye Ngokuhlwanje ndixelele ukuba uyandithanda. Buyela ku USofia, umlinganiswa ophambili, owathi emva kwesithuba eRashiya, wagqiba kwelokuba abeke ubomi bakhe bothando ngendlela efanelekileyo. Kodwa kuhambo oluya eSicily lokundwendwela abazali bakhe uya kufumanisa imfihlo yosapho iya kukuchaphazela ngokunzulu.
Abafazi bathenga iintyatyambo - UVanessa Monfort
Uncwadi lobufazi Abafazi abahlanu abahlala embindini wesixeko kwaye bahlala bethenga iintyatyambo izizathu ezahlukeneyo: ngothando lwakhe olufihlakeleyo, kwiofisi yakhe, yokupeyinta, kubathengi bakhe, okanye ... kumntu ofileyo. Kwaye nguloo mntu ophambili oxelela ibali lakhe.
Indlu yaseJamani -U-Anna Hess
Elinye ibali lomfazi ophambili yile UEva bruhn, obomi bakhe bujikeleze iNdlu yaseJamani, i yokutyela yemveli ziqhutywa ngabazali bazo kwaye apho bonke babelana ngemini yabo nosuku.
Kodwa kwi 1963 Isiphelo senza uEva enze isenzo intentrprete Kwilingo lokuqala Auschwitz, ngaphandle kwenkcaso yosapho. Kwaye xa ihamba Guqula ubungqina babasindileyo, fumanisa uloyiko iinkampu zoxinaniso kunye nenxalenye yembali yakutshanje ebendingazi ngayo.
Ayinamsebenzi ukuba sele kudlule iminyaka elishumi ukupapashwa kwencwadi yakhe yangaphambili, kwa abo balandeli bakhe bazinikeleyo belinde oku ukuhanjiswa okutsha Elinye ityala kuye Umhloli weVigo uLeo Caldas. Bekufanelekile kuba uVillar ubuyile endaweni yakhe ngaphezulu kubabhali abathengisa kakhulu. Umzekelo we indibaniselwano egqibeleleyo phakathi kwe ibali lesimilo neemeko-bume, la Inoveli yomcuphi kunye nezo abalinganiswa ukuba banxibelelana naye kwiminyaka eyadlulayo Intliziyo zabafundi bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » I-Allende, i-Espinosa, i-Asensi, i-Villar, iMoccia ... i-8 yeyona nto ithengiswa kakhulu kwezi nyanga